Soro nwa gị na -emega ahụ n'ụlọ - Nwee usoro a! | Ndị Nne Taa
Susana godoy | 26/09/2021 14:00 | Fitness
Gị na nwa gị na -emega ahụ n'ụlọ bụ otu n'ime oge kachasị mma n'ụbọchị. N'ihi na n'otu aka ị ga -enwe ọdịdị na nke ọzọ, ị ga -ekerịta oge ahụ na obere onye anyị hụrụ n'anya nke ukwuu yana onye ga -eritekwa uru na mmegharị ọ bụla. Yabụ na ọ dị ka ha niile bara uru ma anyị masịrị ya karịa.
Site na mbata nwata, anyị anaghị ewepụta oge maka onwe anyị, anyị makwa ya. Anyị agaghị enwe ike inwe oge ahụ anyị ga -aga mgbatị ahụ ma ọ bụ gaa mee egwuregwu kachasị amasị anyị n'èzí. Yabụ, ọ bụ oge ime mgbanwe maka ọnọdụ ọhụrụ mana akwụsịghị mmega ahụ. Gbalịa mee usoro a!
1 Otu esi eso nwa gị na -emega ahụ n'ụlọ: obere Cardio!
2 Agbagharala squats!
3 Akwa n'elu ubu
5 Na -emega ogwe aka gị
Otu esi eso nwa gị na -emega ahụ n'ụlọ: obere Cardio!
Otu n'ime ihe mbụ anyị ga -emerịrị bụ mee nwa obere cardio. Maka nke a, na -ejedebere n'ụlọ anyị, anyị nwere ike họrọ mgbe niile ịgabiga ya ntakịrị karịa ka anyị na -eme ịgagharị. Ọ bụrụ na ụlọ gị enweghị mita dị mkpa ma ọ bụ ị hụ na ọ bụ mmegharị ahụ na -eme ka ị na -enwe nkụda mmụọ, ị nwere ike gosi onwe gị ịgba egwu mgbe niile, ọ naghị adị oke ike ma ọ bụ mee ihe n'otu ebe. N'ụzọ dị otu a, anyị ga na -arụ ọrụ ahụ ka nwa na -enwekwa mmegharị ahụ na ọ bụ ezi echiche ịnabata ya ma ọ bụ zuru ike, dabere na oge ehihie.
Ọ bụ otu n'ime nnukwu mmega ahụ anyị nwere ma kwesịrị ịdị na -eme ya oge ọ bụla kwesịrị nnu ya. Ịme nwa gị mmega ahụ n'ụlọ agaghị egbochi gị. Gị na ha na -arụ ọrụ afọ, ha na -emeziwanye ọnọdụ ha n'ihi na ọ bara uru maka azụ n'otu oge ha na -ere ọkụ kalori na ụda isi. na apata ụkwụ. Ị nwere ike were nwa gị were aka gị, gbatịa aka gị n'ihu wee mee squat. N'ezie, ọ bụrụ na ọ ga -adịrị gị mma karịa, ị nwere ike na -eyi akwa mgbe ọ bụla wee mee mgbatị ahụ ahụ dị gị n'ahụ.
Ugbu a, ị ga -edina ala n'azụ gị na ụkwụ gị ehulata. Ọ ga -adị na mpaghara a, n'etiti akụkụ ụkwụ na afọ ala ebe ị ga -etinye nwa ahụ. Na -agbalị mgbe niile idobe ya ebe ọ bụla na tupu ị na -emega ahụ. Ugbu a bụ oge ịmalite ibuli hips gị n'ala ma jiri nwayọ gbagoo. Arịla na ngọngọ mana ọ ka mma ka ị jiri nwayọ laa azụ ruo mgbe a ga -eji ọbụ ụkwụ na akụkụ ubu akwado anyị. Jiri ntakịrị ntakịrị gbada azụ mana tupu ị kụọ ala, gbagoo ọzọ. Ị ga -enwe ọdịdị nwa ọhụrụ ahụ ga -enwekwa obi ụtọ dịka ọ na -enwetụbeghị mbụ!
Ihe a bụ maka mmega ahụ bụ isi na nke ahụ bụ na imega ahụ nwa gị n'ụlọ na -enye gị ohere ịnụ ụtọ ọtụtụ nhọrọ nke bara uru n'ezie. Kedu onye na -amaghị efere dị egwu? Ọ bụ eziokwu na anyị niile anaghị amasị ha niile, mana ha dịkwa mkpa. N'ihi na melite nguzozi yana nhazi na ọbụna mgbanwe. Na -echefughị ​​na ha na -ewusi isi gị ike, nke ahụ na -atụgharịkwa na nchekwa dị ukwuu maka ahụ gị. Yabụ, ị ga -etinyerịrị ute ya n'elu ya ka nwa gị chee ihu. Ugbu a ọ bụ oge gị ka ị ga -eche ihu nwa ahụ, na -akwado ogwe aka gị gburugburu ya na ị ga -ejide ihe dị ka sekọnd iri atọ ka agbatị ụkwụ gị ma na -eme ntakịrị itule na ndụmọdụ mkpịsị aka gị. Obere ntakịrị ị nwere ike iwelie oge ruo otu nkeji.
Na -emega ogwe aka gị
Ọ bụ eziokwu na anyị lekwasịrị anya na mpaghara afọ, n'agbanyeghị na ọ na -akwalite ahụ niile mgbe niile. Maka na ọ bụ otu akụkụ ahụ nke na -esighi ike kachasị n'ihi afọ ime na ịmụ nwa, yabụ anyị ga -eji nwayọ nwayọ nwayọ ọzọ. Ma ogwe aka agaghị ahapụ. Maka nke a, ị nwere ike họrọ iwere nwa gị were aka gị jide ya nke ọma. Gbatịa aka gị n'ihu ma ugbu a n'otu ume ị na -ewelite ya, na -agbatị aka gị elu. Kedu ihe dị mfe? Ọ dị mma ka anyị mee ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Nlekọta » Fitness » Ị chọrọ ka gị na nwa gị na -emega ahụ n'ụlọ? Anyị na -atụ aro usoro a
Onyinye maka nne na nna meworo okenye